Toyota Myanmar introduced the global best-seller Corolla Altis, with over 47.5 million units sold to date, to the local market earlier this month.
The all-new Corolla Altis will be sold at the price of $36,000, with seven exterior and two interior colors to choose from. The sedan also comes withathree-year or 100,000 k.m. warranty and comprehensive after-sale support through authorized Toyota dealers.
The car offers leading-edge driving performance made possible by Toyota New Global Architecture (TNGA). It is designed to havealower center of gravity for better balance, stability and handling on curves. The double wishbone rear suspension substantially boosts the car’s stability and ensures smooth rides.
Asasafety feature, the sedan is equipped withapre-collision system (PCS) that uses sensors to detectapreceding vehicle, pedestrians and bicyclists on the vehicle’s path. When it judges that there isapossibility ofacollision, PCS assists the driver in collision avoidance maneuver withawarning and brake control.
The car’s Dynamic Radar Cruise Control can detectapreceding vehicle and allows for following it while maintainingasuitable vehicle-to-vehicle distance. Its Lane Departure Alert (with steering control)/Lane Tracing Assist isanew advanced driving support system assisting the driver in steering control with gentle inputs to keep the vehicle in the center of the lane, even on curves.
The Automatic High Beam detects surrounding light during nighttime driving and automatically switches between high and low beams to contribute to securing visibility and reducing glare towards oncoming traffic.
Other safety features include Back Camera and Sonar System, Vehicle Stability Control, Hill-start Assist Control, Traction Control System, Anti-lock Brake System, Electronic Brake-force Distribution,7SRS Airbag System, Brake Assist and Global Outstanding Assessment Body with Side Door Impact Beams.
Toyota is building an assembly plant in Thilawa Special Economic Zone to produce 2,500 Toyota Hiluxes annually under the SKD system. The $52.6 million plant will be staffed with 130 employees when it starts operation in 2021.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ရောင်းအား ၄၇ ဒသမ ၅ မီလီယံကျော်အထိ ရှိထားသည့် Toyota ကားဖြစ်သည့် Toyota Corolla Altis ကို မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင် နိုဝင်ဘာလ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကားကို အပြင်ပိုင်း အရောင် ၇ မျိုး ၊ အတွင်းပိုင်းအရောင် ၂ မျိုး ထုတ်လုပ်ထားပြီး ယင်းကားကို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ဝ ၊ အာမခံချက်အနေဖြင့် ၃နှစ်/ ကီလိုတစ်သိန်း ရမည်ဖြစ်သည်။
Corolla Altis တွင် Toyota New Global Architecture (TNGA) နှင့် မောင်းနှင်မှု စနစ်အသစ်ကို ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် ယာဉ်မောင်းနှင်ရာတွင် အဖြောင့်အတိုင်းသာမက ကွေ့ကြောမောင်း နှင်သည့်အခါတွင် ယာဉ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို အားကောင်းစေကာ ကား၏ အောက်ပိုင်းဗဟိုဆွဲအားကိုလည်း ကူညီပေးသည်ဟု Toyota ကညွှန်းထားသည်။
၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဆိုင်းထိန်းခေါ် Double Wishbone သည် ဘီးကုတ်အား ထိန်းချုပ်မှုကို ငြိမ့်ညောင်းစွာ စီးနင်းအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် စတီယာရင် အချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်တိကျစွာ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရနိုင်ရန် စတီယာရင်ဘီးကို ချိန်ညှိပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူအနေဖြင့် ကားကို အလွယ်တကူထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် ယာဉ်တိုက်မှုကြိုတင်ကာကွယ် သတိပေးစနစ်ဖြင့်သည့် PCS စနစ်ပါရှိသည့်အတွက် မိမိယာဉ်လမ်းကြောရှိ ရှေ့မှ မောင်းနှင်နေသည့်ယာဉ်၊ လမ်းလျှောက်နေသူများနှင့် စက်ဘီးစီးနှင်နေသူများကို ရှာဖွေရန်အတွက် အာရုံခံကိရိယာကို ထည့်သွင်းပေးထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစနစ်ပါဝင်သည့်အတွက် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို စနစ်က ခန့်မှန်းကာ သတိပေးခြင်း၊ ဘရိတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပြန်သည်။
ထို့ပြင် Dynamic Radar Cruise Control သည် အလိုအလျောက် အရှိန်နှုန်းထိန်းချုပ်စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ရှေ့မှမောင်းနှင်သည့် ယာဉ်နှင့် နောက်မှမောင်းနှင်သည့် ယာဉ်နှစ်စီးကြားတွင် သင့်တင့်သော အကွာအဝေးကို ထိန်းညှိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Lane Departure Alert ပါဝင်သည့်အတွက် ယာဉ်ကြောပြောင်းလဲပါက သတိပေးအချက်ပြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယာဉ်ကြောသွေဖီသွားခြင်းမရှိစေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းကြောင့် ခရီးရှည် မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် အားစိုက်ထုတ်မောင်းနှင်ရခြင်းကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ညဘက်မောင်းနှင်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးကို အာရုံခံရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်စေရန်နှင့် ရှေ့မှလာသည့် ယာဉ်ကို အလင်းစူးခြင်းလျော့နည်းစေရန် အနိမ့်မီးနှင့် အမြင့်မီးကို အလိုအလျောက်ပြောင်းပေးသည့် Automatic High Beam ကို အသုံးပြုထားသည်။
ယာဉ်မောင်းသူနှင့် လိုက်ပါစီးနှင်းသူကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် နောက်ကင်မရာနှင့် အာရုံခံစနစ်၊ ယာဉ်တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်စနစ်၊ တောင်တက်အကူထိန်းချုပ်စနစ်၊ ဘီးကုတ်အားထိန်းချုပ်စနစ်၊ ရုတ်တရက် အလွယ်တကူ ဘရိန်အုပ်နိုင်သည့် စနစ်၊ အီလက်ထရောနစ် ဘရိတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ လေအိတ် ၇လုံး ပါရှိခြင်း၊ ဘရိတ်အကူအညီစနစ်၊ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားပါက ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကူအညီပေးသည့် ဘေးဘက်တံခါးရောင်စဉ်မီးများပါသော ကိုယ်ထည်တို့ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
Toyota သည် ပြည်တွင်းတွင် SKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် စက်ရုံတည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ယင်းစက်ရုံမှ တစ်နှစ်လျှင် Toyota Hilux ယာဉ်အစီးရေ ၂၅၀၀ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂.၆သန်းခန့်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီး စက်ရုံလည်ပတ်ချိန်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၃၀ဦခန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်သည့် စက်ရုံတွင် လာမည့်၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကားထုတ်လုပ်ရေးစတင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleEconomic Development Should Not Have to Wait for Peace
Next articleYangon Buildings in Need of Repair after Earthquake